Immisa ayuu yahay Tumblr? | Martech Zone
Jimco, Febraayo 28, 2014 Douglas Karr
Waayahay, malaha su'aasha koowaad waa maxay Tumblr? Tumblr waa madal microblogging iyo shabakad isku xirka bulshada (hada waxaa iska leh Yahoo!). Barxadku wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay ku dhajiyaan waxyaabo badan oo warbaahin ah iyo waxyaabo kale oo ku jira bog gaaban. Nidaamku wuxuu ku dhismay habab si uu ula wadaago isticmaaleyaasha kale - isagoo wata wada shaqeyn iyo aragti u leh dadka ka faa'iideysanaya. Waxay sidoo kale leeyihiin runtii aad u fiican app mobile.
In kasta oo aanan soo noqnoqon Tumblr, waan sameeyaa La wadaag waxyaabahayaga ku jira barteyda Tumblr iyada oo loo marayo Jetpack is dhexgalka oo WordPress ku daray. Waxaan sidoo kale raacayaa dhowr Tumblr oo waxaan ka helayaa emayl aad u fiican oo casriyeysan nidaamka leh burburka waxa wadaaga cidda. Suuqgeeye ahaan, waxaa laga yaabaa inaadan ogaan karin inta ay shabakadani weyn tahay, in kastoo. Lambarada waa quruxsan cajiib ah!
Dib u eegista martigelinta Websaydhka ayaa la wadaagtay xogtan wax walba oo ku saabsan Tumblr:
Tags: intee le'eg yahay tumblrtumblrtumblr vs facebookTumblr vs pinterestTumblr vs twitterwaa maxay tumblr
Mashape wuxuu isku xiraa horumariyeyaasha iyo API-yada